यी ३ तेल अखाद्य रहेको प्रमाणित, प्रयोग गरे क्यान्सरसम्म हुनसक्ने पुष्टी ! « News24 : Premium News Channel
यी ३ तेल अखाद्य रहेको प्रमाणित, प्रयोग गरे क्यान्सरसम्म हुनसक्ने पुष्टी !
काठमाण्डौ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्ज्ञत्रण विभागले तेलको नमुना परिक्षण गर्दा बेन्जन, फेमेली र सनफ्लो तेल अखाद्य रहेको प्रमाणित भएको छ । विभागले बेन्जन , शिवशक्ति ब्रान्डको फेमेली, स्वस्तिक ब्रान्डको सनफ्लो, धारा ब्रन्ड, धारा हेल्थ, सिजिको सेफब्रान्ड सनफ्लो, अमृत सनफ्लावर, फर्चुन सनफ्लावर, सनफ्लो र शान्ति सोयाबिनको नमुनाशरु संकलन गरी जाँच गरेकोमा बेन्जन,फेमली र सनफ्लो तेल मापदन्ड विपरित भेटिएको छ ।
बजारमा अखाद्य तेल बेचिराखेको उजुरीका आधारमा गरीएको अनुगमनका क्रममा यस्तो कैफिएत फेला परेको हो ।
विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत एव्म प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीका अनुसार ९ तेल परिक्षण गर्दा ३ तेल अखाद्य भेटिएको हो । उनका अनुसार फेला परेका तीन वटा ब्रान्डको तेलमा एसिड भ्यालु ० दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढी भेटिएको थियो । एसिड भ्यालु बढीहुँदा अपचको समस्या हुने, छालामा समस्या देखिने, पाचन प्रक्रियामा समस्या देखिने र अन्तत क्यान्सरसम्म हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
यसरी जनस्वास्थ्य माथि नै खेलबाड हुने गरी तेल बेच्दा पनि यस्तो अखाद्य बस्तु बेच्नेलाई कारबाहि भने निकै फितलो हुने गरेको छ । ऐन अनुसार कमसल अखाद्य बस्तु बिक्री हुँदा सुरुवातमा एक हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना छ । पटकपटक गरे १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना हुने प्रवाधान छ । निकै नै फितलो कानुन भएकाले पटकपटक गल्ती गर्ने गरेको फेला परेको छ । यसमा विभागकै कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको छ ।
यस्ता मानिसहरू लामखुट्टेकाे राेजाइमा पर्छन्